I-China i-330mm Ubude beCarbon Carbide Rods yeeNkcazo zeMveliso kunye nabathengisi | Xinhua
Ubude be-330mm yeCarbon Carbide Rods Inkcazo yeMveliso
Imidiza yeCarbide esemazantsi enobude obungu-330mm
izinto ezidityanisiweyo eziqulathe iikhompawundi zensimbi ezikhanyelayo (isigaba esinzima) kunye nesinyithi sokubopha (isigaba sokubopha) esiveliswa ngumgubo wokunyibilikisa isinyithi.
Izinto zeentonga zekhabhayithi eziqinisiweyo eziveliswa yinkampani yethu zineempawu zokusebenza okuzinzileyo, ukuwelda ngokulula, ukunxiba ukuxhathisa kunye nokuchasana nefuthe. Izinto eziphathekayo zisetyenziselwa ukuvelisa izixhobo, i-endmills, i-drill, i-cutter cutter. Iintonga zeCarbide zingasetyenziselwa ukusika, ukunyathela kunye nezixhobo zokulinganisa,
Inkampani yethu ikakhulu ibonelela nge-h5, i-h6 tolerence i-carbide rods kunye ne-carbide rod blanks
Ubude obuqhelekileyo bentonga yethu ende ngama-330mm kunye nama-310mm.
Ubude obufutshane beentonga ezinobungakanani obahlukeneyo bunokwenziwa ngokweemfuno zabathengi
* Izinto zethu ezi-3 ezifanelekileyo ze-woodworking kunye ne-carbide endmill
ISO h6 ubuchule ISO h6 ubuchule
Egqithileyo Imithi yeCarbide
Okulandelayo: Carbide bokushicilela Burr SA Imilo -Cylinder Imilo
Iintambo zeCarbide ezingama-330mm